डेंगू र मलेरिया देखि अन्य थुप्रै राेगहरुसँग लड्नमा मेवाको पातको जूस धेरै नै लाभकारी: यसप्रकार छन् फाइदाहरु - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it हाम्राे शरिरकाे मुटुपछिकाे महत्त्वपुर्ण र्पाट कलेजो कसरी स्वस्थ राख्ने ?
Up Next जाडाेमा बाँसकाे तामा खानुपर्ने रहेछ । किन र कसरी खाने ? स‍ेयर गरि याे जानकारी सबै माज पुर्याउनुहाेला
नङ फुल्दा नयाँ लुगा हाेइन, राेग आउने गर्दछ – महत्वपूर्ण जानकारी
नङमा सेतो धर्सा बसेमा हामी त्यसलाई नङ फुलेको भन्छौँ । बच्चाबेलामा यसरी नङ फुल्दा नयाँ तथा राम्रो लुगा पाइन्छ भनेर…
कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? याे तरिका अपनाउनुहाेस्
हामी मध्ये धेरैलाई कपाल झर्ने समस्याले दिक्क बनाएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । युवा अवस्थामा नै धेरै जसो युवायुवतीको…
खाना खाइ सके पछि सोप किन खाने ? यसरी खाए यस्तो छ फाइदा
खाना खाइसकेपछि हामी सोप चपाउँछौ । न यो धेरै स्वादिलो हुन्छ, न बेस्वादको । न यसलाई अघाउनेगरी खाइन्छ, न कुनै…
गाईको दुधमा कस्तो पोषक तत्व पाइन्छ ? कति लाभदायक हुन्छ ?
मानिस मात्र एउटा त्यस्तो प्राणी हो, जसले अरु जनावरको दुधमा आँखा लगाउने गर्छ । दुध मावन स्वास्थको लागि, खासगरी हड्डीको…
विचार गर्नुहोस् ! बिहान अबेरसम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग
अहिले याे बढ्दाे जाडाेमा हत्तपत्त बिहानै कसैलाइ पनि अाेछियान छाेड्न मन लागि हाल्दैन र सुतिराख्न पनि कसलाई मन पर्दैन ।…
बिल गेट्स विश्वकै सफल तथा धनी व्यक्तिहरु मध्ये एक हुन् । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालीक उनी समाज सेवाका काममा पनि उत्तिकै…
अध्यारोमा बसेर मोबाइल चलाउँदा स्वास्थ्य हुने समस्या यस्ता छन्
आजभाेलीका मानिसहरूका लागि माेवाइल पानी जत्तिकै जरूरी भईसकेकाे छ । माेवाइलबिना एकछिन पनि बस्न सक्दैनन् आजभाेलीका युवापुस्ता । अधिकांश मानिसहरु…
कसरी हटाउने धेरै सोच्ने बानी ? जान्नुहाेस्
वर्तमानलाई हेरेर भन्दा बढी हामी विगत र भविष्यलाई दिमाग राखेर बाँचिरहेका हुन्छौं । जसले गर्दा अनावश्यक सोचहरु जन्मिन्छन् र हामीले…